रोचक खबर – Page5– rastriyakhabar.com
बिश्वकै लामो गाडी २६ पाङ्ग्रे जहाँ छ Swimming pool , हेलिकप्टर , रुम भान्छा घर
अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेता धर्सा देखिन्छ । पेट, हिप, पिँडौला, स्तनआसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन् । छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ । शरीरका केही भाग खाली देखिने गरी साडी, ब्लाउजलगायत खुला कपडा लगाऊँदा सेता धर्साहरू दुनियााका..
खैरो र सेतोमध्ये कुन अण्डाले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ ?
अण्डा एउटा यस्तो सुपरफुड खाना हो जसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, ओमेगा ३, फैटी एसिड भिटामिन ए र बी भरपूर मात्रामा पाइन्छ । दिनहुँ खण्डा खानाले गम्भीर रोग लाग्नबाट मान्छेलाई जोगाउँछ । अण्डा खानाले हड्डी मजबुत बनाउँछ । तर, धेरै मानिसलाई खैरो र सेतोमध्ये कुन चाहिँ अण्डा स्वस्थकर हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहन्छ..
महिलाले शारीरिक सम्बन्ध अघि के-के नखाने ?
एजेन्सी । महिला र पुरुष दुवैका लागि शारीरिक सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर हामी यस बारेमा खुलेर छलफल गर्न चाहन्नौँ । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमासमेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरुले यौन..
आइतवार, चैत्र १६, २०७६ मा प्रकाशित
अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन । तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुलेपनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन् । तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ। जसले अनुहार..
कुन महिना जन्मेको मान्छे कस्तो हुन्छ
‘सेक्स’ चाहना महिलालाई राति र पुरुषलाई विहान किन बढी हुन्छ ? यस्तो रहेछ रहस्य
शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘जसरी जीवनमा खाना, निन्द्रा र अन्य दैनिक काम जरुरी छ, सेक्स पनि त्यतिकै जरुरी छ । धेरैलाई सेक्स कतिबेला गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन । अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा भएको एक अनुसन्धानमा पुरुष बिहानको समयमा यौन गर्न बढी इच्छुक हुने रहस्य खुलेको छ । तर, ठीक उल्टो महिला भने मध्यरातमा बढी रोमान्टिक..
हातका रेखामा हेरेर मानिसको भविष्यवाणि गर्ने कुरा सवैलाई थाहा भएकै विषय हो । ज्योतिषहरुका अनुसार हातमा भविष्य बताउने रेखाहरु हुन्छन् । यति मात्र होइन, शरीरका विभिन्न भागका चिन्ह, बनौट र रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव निर्धारण गर्ने समेत उनीहरु बताउँछन् । हातको रेखा जस्तै खुट्टाका रेखाले पनि..
बुधबार, फाल्गुन ७, २०७६ मा प्रकाशित
यी ८ धार्मिक आचरणपछाडी लुकेको छ वैज्ञानिक कारण
शनिबार, फाल्गुन ३, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ ।रीति–रिवाज तथा परम्पराहरुलाई मान्नु हाम्रो आस्था वा विश्वासमा निर्भर गर्छ । तर, हाम्रो केही रीति–रिवाजहरुको वैज्ञानिक फाइदा पनि छन्, जसले तपाईलाई स्वास्थ्य बनाउन मद्दत गर्छ । जान्नुहोस्, हामीले गर्ने गरेको यी ८ धार्मिक आचरणसंग के छ विज्ञानको सम्बन्ध ? १. टीका लगाउनु – निधारको बीच भागमा..
ज्योतिष शास्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशि भएका युवतीहरुमा विशेष गुण हुन्छ । उनीहरु आफ्नो राशिको प्रभावले जो सुकै पुरुषलाई पनि पगाल्न सक्छन् । १२ राशिमध्ये चार राशि भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रिझाउन सक्षम हुन्छन् । यी निम्न चार राशि भएका युवतीहरुमा मात्र यस्तो प्रभाव हुन्छ,..
सुत्ने तरिकाबाट थाहा हुन्छ यौन जीवनको रहस्य
तपाइँ सुत्ने पोजिसन वा तरिकाबाट तपाईको जीवन साथीसँग सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । अनलाइन समूहको मैट्रेस अडभाइजरले यस सम्बन्धमा एउटा अनुसन्धान गरेको थियो जसले सुताइको अवस्थाका आधारमा सम्बन्ध पत्ता लगाउन सहज हुने दाबी गरेको छ । अनुसन्धानमा १८ देखि ७३ वर्ष बीचका..